Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada oo soo xiray tababarkii u socday dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee COVID-19 – Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed
Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada oo…
Muqdisho (JUS): Munaasabad lagu soo xirayay tababar loo qabtay dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee COVID-19 ayaa maanta lagu qabtay Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho. Munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda Caafimaadka, XFS, Wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada HTS, Raktarka Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed (JUS), Hormuudka Kuliyadda Caafimaadka JUS, dhaqaatiir, iyo marti sharaf kale.
Wasiiru dowlaha Wasaaradda waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare, mudane, Cabdi Raxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabiri ayaa soo xiray xalfadda xiritaanka koorsada loo qabatay dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee lagu barayay daawaynta iyo xakamaynta COVID-19.
Wasiiru dowlaha ayaa sheegay In dhaqaatiirta Soomaaliyeed ay kaalin muhiim ah ka qaateen ka hortaga COVID-19, isaga oo Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed uga mahad celiyay dadaalka ay ku bixsay koorsadaan looga fa`iideeyay dhaqaatiirta Soomaaliyeed, taas oo ku soo aaday xili loo baahnaa.
Raktarka Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed Prof. Maxamed Axmed Jimcaale, ayaa sheegay in xilli dadka ay wajahayeen xaalad sababtay in guryaha la isku soo xiro COVID-19 dartiis, ay u istaageen bilaabida iyo qabashada koorsadaan, si ay dhaqaatiirta Soomaaliyeed uga caawiso la tacaalidda COVID-19.
“Tababarkan waxaa barayaal ka ahaa dhaqaatiir ka mida kuwii ugu horreeyay ee wajahay dawaynta iyo la tacaalida karoona fayrus, kuwaaasi oo ka hawl gala dalka Talyaaniga”. ayuu yiri Raktarka Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka XFS, Mudane Maxamed Saciid Cabdullaahi, ayaa u mahad celiyay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Talyaaniga sida habsamida leh ee ay u fududeeyeen koorsadaan ay ka faaidaysteen dhaqaatiirta Soomaaliyeed.
“Dowladda Talyaaniga ayaa furtay isbitaal Di Martini, waxaana farxad ah in ay hadda cudurka covid 19 tababar lagula tacaalayo xakameyntiisa iyo daaweyntiisa ka qeyb qaataan dhaqaatiirtooda” ayuu yiri Wasiir Maxamed Saciid.
Kooraskaan waxaa ka faa’iideysanayay dhaqaatiir ka kala socday Wasaaradda Caafimaadka, Jaamacadda Ummadda, Guddiga qaran ee kahor tagga COVID-19, Ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo Xarunta xariirka COVID-19 iyo Dhaqaatiir iyo howlwadeeno caafimaad oo ku sugnaa dowladd gobolaydyada dalka. koorsadaan oo ku baxaysay mareegta interneetka, kana koobanayd laba weji oo wajigiisa hore uu socoday May 18-30, 2020, wajiga labaad oo soo bilowday 3 Juun ayaa maanta loo soo xiray dhaqaatiirta.
Ugu dambeyn Raktarka Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed, Prof. Maxamed Axmed jimcaale, ayaa ku booriyay wasiiradda in ay gacan ka gaystaan sidii Jaamacadda Ummadda looga taageeri lahaa tayaynta agabka sahlaya tababarada nuucaan oo kale ah, si kor loogu qaado loona kordhiyo koorsooyin ay u baahan yihiin dhaqaatiirta iyo ardayda Soomaaliyeed.
Categories: News, SliderBy snuedu June 16, 2020 Leave a comment
PreviousPrevious post:SNU, launched a Covid-19 Online Medical Profession Development Course for Medical professional Doctors.NextNext post:Qabashada Araajida Dufcadda 5aad ee Diplomaha sare ee Qaanuunka oo bilaabatay